4 talaabooyin fudud in ay tirtirto Barta bartamaha Search History on iPhone
Waxaa dhacaya oo dhan wakhtigii mar kasta oo aad isku dayaan in ay isticmaalaan diirada ku iPhone in ay raadiso macluumaadka, waxay u muuqataa in natiijadu waa isku mid, iyadoo xitaa waxyaabaha qaar ka mid ah, sida farriimaha qoraalka ah, aad hore u tirtiray. Taasi waa sababta dadku mar walba dhahayaan waxaan tirtiray fariimaha qoraalka ah. Si kastaba ha ahaatee, markii aan ka raadin ifinaya, weli waa ay jiraan ". Taas darteed, dad badan ayaa waydiinaya su'aasha ah "sida in ay tirtirto taariikhda diirada raadinta on iPhone?"
Furaha in ay tirtirto taariikhda diirada raadinta on iPhone waxaa la tirtiro diirada la rabin macluumaad bandhigay gabi ahaanba. Sidee loo sameeyo? Gacanta waad samayn kartaa. Ha hadalkayga qaado, waxaa ka? Waxaa na tijaabi keligaa. Waxaan si adag ugu talinaynaa in aad isku daydo SafeEraser Wondershare in ay nadiifiso iPhone taariikhda diirada raadinta. Kaliya 4 talaabooyin fudud, waxaad kala cadeeyo doonaa taariikhda diirada ku iPhone si fudud.
Tallaabada 1 Delete macluumaad la rabin aad iPhone
Si aad u tirtirto taariikhda diirada raadinta on iPhone, hore tirtirto warbixin ah in aadan rabin in uu soo bandhigo in diirada page natiijada baaritaanka. Sure, waan ogahay taas uma shaqeeyo marka hore sababtoo ah waxaad ka heli kartaa taariikh diirada raadinta xitaa ka dib markii Kabcada_. Si kastaba, waxa ay hore u sameeyaan. Ka dib markii samaysaan sida 4 tallaabooyinka kuu sheegi inay sameeyaan, ka dibna aad u gaartid waxa aad doonaa goolka.
Tallaabada 2 Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare on your computer
Wondershare SafeEraser waa aalad desktop ah. Waxaad kala soo bixi kartaa ka Windows ama Mac version oo ku xidh on your computer. Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah. Burcad SafeEraser Wondershare oo aad ka arki kartaa waxa aad ogaadaa iPhone si toos ah.
Tallaabada 3 masixi xogta la rabin
Riix 'masixi Private Data' galeeysid bidix si ha barnaamijkan u falanqeeyaan iyo baarista iPhone.
Tallaabada 4 taariikhda diirada Delete search
In bogga natiijada, hubi 'tirtiray Data' iyo 'Cache keyboard'. Riix 'masixi Hadda' inuu iyaga ka dhaqaajiyo ka iPhone. In labaad dhawr, geeddi-socodka waa in la dhammeeyo. Markaas waa in aad tuurid aad iPhone ka cable USB ah. Hoos screen guriga si ay awood diirada raadinta. Laga soo bilaabo halkan, xitaa nooca in keyword isla marka aad ku qortay in, natiijada waa in kala duwan haddii aad iska bixiso macluumaad qaar ka mid ah oo u dhiganta in tallaabo 4.
Talooyin: waxyaabaha sababta tirtiray, sida farriimaha qoraalka ah ayaa wali ka jirta natiijada diirada raadinta?
Jawaab: Marka aad tirtirto macluumaadka qaarkood, sida farriimaha qoraalka ah ee aad iPhone, waxaa aan weligiis ka baxeen, laakiin weli hartay aad iPhone meel. Taasi waa sababta diirada weli raadin kartaa oo iyaga soo bandhigaan. Keliya iyadoo la isticmaalayo qalab in ay tirtirto macluumaadka gebi ahaanba ka iPhone, ma ka dhex muuqan doonaa diirada raadinta.
Fiiro gaar ah: mabda'a in ay tirtirto taariikhda diirada raadinta on iPhone aan dalbaday in qodobkan waa in ay tirtirto khasnado keyboard iyo macluumaad la rabin mar soo bandhigay in diirada raadinta page natiijada. Ka dib markii in, diirada raadinta si toos ah u cusbooneysiin doonaa natiijada, waxaad soo bandhigeen macluumaad cusub.
Sida loo Delete All ama Multiple Songs / Music ka iPhone
> Resource > masixi > talaabooyin fudud in ay tirtirto Barta bartamaha Search History on iPhone